Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana
:: FANDRAISANA ::
1. Ny Baiboly
2. Fianarana ny Baiboly
4. Jesosy Kristy
5. Asan'i Kristy
7. Fanahy Masina
8. Vavaka sy mpino
Ahoana ny fampiharana ny asan'i Kristy amin'ny fiainan'olombelona? Ahoana no ahafantarana fa kristianina ny olona iray? Efa nampahafantarin'Andriamanitra antsika ao amin'ny Baiboly ny fandaharany momba ny famonjena. Ho hitantsika amin'ity fizarana ity ny fomba amonjeny ny olombelona.
I. Ny fahefan'Andriamanitra amin'ny famonjena
A. Ny fandaharan'Andriamanitra ny famonjena
1. Vakio ny Romana 8:29-30. Soraty etsy ambany ireo dingana fanavotan'Andriamanitra ny olona iray.
Andininy faha 29: "... izay _________________ rahateo no ________________"
Andininy faha 30: "... izay __________________ no ______________________"
2. Vakio ny Efesiana 1:4-6.
a) Inona ny fandaharan'Andriamanitra talohan'ny fanorenana izao tontolo izao (andininy faha 4)?
b) Inona ny tanjony amin'ny fanavotana antsika (andininy faha 4)?
Ny "fahasoavana" dia ny fitiavana sy famindram-po maimai-poana omen'Andriamanitra ho famonjena ny olona amin'ny alalan'ny fahafatesana sy fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Izany dia tsy miankina amin'ny asan'olombelona.
B. Tanterahin'Andriamanitra ny tetik'asa famonjeny
Ny didin'Andriamanitra mampahafantatra ny fandaharany
"... araka y fampisehoana ny zava-nihafina, izay nafenina hatry ny fahagola; fa efa naseho ankehitriny tamin'ny soratry ny mpaminany, araka ny didin'Andriamanitra mandrakizay ka nampahafantarina any amin'ny firenena rehetra ahatonga fanekena ny finoana." Romana 16:25-26.
1. Ahoana ny toe-panahin'ny olona aloha'ny fiovàny ka andraisany an'Andriamanitra (Efesiana 2:1)?
2. Inona ny ataon'Andriamanitra (Fanahy Masina) momba ny ota (Jaona 16:6)?
3. Inona no ilaina alohan'ny ahafahan'ny olona iray mahalala ny marina (2 Timoty 2:25)?
4. Iza no manome an'izany?
5. Iza no manome antsika ny zo maha zanak'Andriamanitra (Jaona 1:12-13)?
Tsarovy fa io zo maha zanak'Andriamanitra io dia tsy omena anao satria:
lovanao tamin'ny nahaterahana,
niezaka mafy ianao,
izay no tianao.
6. Iza no mampitombo ny mpino (1 Korintiana 3:6)?
7. Iza no mampitsangana amin'ny maty (1 Korintiana 6:14)?
D. Atambatr'Andriamanitra ny fandaharany
1. Ivereno vakiana ny Romana 8:29. Ho tahaka ny endrik'iza isika?
2. Inona no hitranga amin'ny mpino tsirairay (Filipiana 3:20-21)?
3. Inona ny fanirian'i Kristy ho an'ireo olony (Jaona 17:24)?
Voarakitra ao amin'ny Nomery 21:5-9 ny otan'ny zanak'Israely tamin'Andriamanitra, ka nandefasan'Andriamanitra menarana nanaikitra nahafaty azy. Nahatsiaro ny otany ny olona ka nangataka fanavotana. Nasain'Andriamanitra nanantona menarana varahina tamin'ny hazo lava i Mosesy, ary izay rehetra voakaikitra ka nijery izany dia voavonjy. Mitaky fiovam-po izany. Tsy ny menarana varahina amin'ny hazo intsony no ianteherantsika ankehitriny fa i Jesosy Kristy nankeo amin'ny hazo fijaliana.
A. Faharesen-dahatra amin'ny ota
1. Inona no nomen'Andriamanitra ny olona ka mampivoitra ny fahotany (Romana 3:20)?
2. Rehefa tsapan'ny olona ny fahadisoany tamin'ny namantsihana an'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, dia nanao ahoana ny fihetsem-pony (Asa 2:36-37)?
B. Fibebahana amin'ny ota
1. Naninona no niantsoantso an'Andriamanitra tao an-tempoly ilay mpamory hetra (lioka 18:13)?
2. Vakio ny Korintiana 7:9-10.
a) Inona ny vokatry ny alahelo araka an'Andriamanitra momba ny ota (andininy faha 10)?
b) Mitarika ho amin'ny inona izany (andininy faha 10)?
Ny fibebahana dia fialana sy fanalavirana ny ota ary fitodihana sy fiverenana amin'Andriamanitra.
D. Fitodihana amin'i Kristy
Nampiseho finoana ny teny voalazan'Andriamanitra ireo olona voakaikitry ny menarana rehefa nitodika nijery ilay menarana varahina to amin'ny hazo.
1. Inona ny fampanantenana nomena izay mitodika amin'i Kristy (Romana 10:13)?
2. Vakio ny Romana 10:8-10. Ilaina amin'ny famonjena ny finoana.
a) Inona ny tsimaintsy ekena (andininy faha 9)?
b) Inona ny tsimaintsy inoana (andininy faha 9)?
Ny finoana dia midika fahatokisana, fanarahana ary fandraisana an'i Jesosy Kristy, izay votoatin'ny finoantsika.
E. Tonga ho andevon'ny fahamarinana
1. Vakio Romana 8:1-2.
a) Inona ny sazy tambin'ny ota ho an'ireo mino an'i Kristy (andininy voalohany)?
b) Afaka amin'ny inona ny mino (andininy faha 2)?
2. Tonga inona ny mpino rehefa afaka amin'ny ota (Romana 6:18)?
3. Inon ny tombontsoa amin'izany (Romana 6:22)?
Ny fanamasinana dia fiovana miandalana ho tahaka ny endrik'i Jesosy Kristy
III. Porofon'ny famonjena
Zavatra telo lehibe manamarika ny mpino ny finoana miasa, ny fitiavana be fikirizana ary ny fanantenana maharitra (1 Tesaloniana 1:3-4).
A. Finoana miasa
1. Inona no mampiseho ny finoana marina?
a) Jakoba 2:18 _____________________________________________
b) 1 Petera 1:6-7 ___________________________________________
2. Nomanin'Andriamanitra ho amin'ny inona ny mpino (Efesiana 2:10)?
3. Inona no tokony ataon'ny mino an'Andriamanitra araka ny Titosy 3:8? Nahoana?
B. Fitiavana be fikirizana
1. Ankoatran'ny finoana dia inona koa no tsaroan'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny mino (Hebreo 6:10)?
2. Avy aiza ny fiavian'ny fitiavana amin'ny fiainan'ny mino (Romana 5:5)?
3. Inona ny marina mikasika ny olona izay naterak'Andriamanitra (1 Jaona 4:7-8)?
4. Ahoana ny fampisehoan'ny tena mino ny fitiavana (1 Jaona 3:18-19)?
D. Fanantenana maharitra
1. Iza no nambaran'i Jesosy fa ho voavonjy (Matio 10:22)?
2. Inona no mampahery antsika hanana faharetana (1 Timoty 4:10)?
3. Hazavao ny fanantenana ananan'ny Kristiana.
a) Galatiana 5:5 ____________________________________________
b) 1 Tesaloniana 5:8 _________________________________________
c) Titosy 3:7 _______________________________________________
E. Ireo telo izay mitoetra
Inona ireo zavatra telo tsikaritr'i Paoly tamin'ny Kolosiana (Kolosiana 1:4-5)?
Tsy refesi-mandidy Andriamanitra mikasika ny famonjena. Tsy noho ny fahamendrehany no iantsoana ny mino, fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny tetik'asany manokana (Efesiana 1:3-14).
A. Efesiana 1:4
Rehefa tsapanao fa nosafidianin'Andriamanitra ho amin'ny famonjena ianao, dia ahoana no tokony avalinao?
B. Romana 6:12-13
Ahoana no tokony hiainanai ny fiainanao?
Ny tena mpino dia manenina amin'ny otany ary miala amin'izany. Maniry ny hankatoa an'Andriamanitra sy hanar-dia an'i Kristy izy. Ny tena mpino dia mampiseho:
Fitiavana be fikirizana
Ireo toetra telo ireo dia hita amin'ny fiainan'ny tena mpino, ary mamaritra ny lalan-kizorany.
Vakio ny Salamo 116:16-17. Inona ny fampiharana azonao atao manomboka androany?
www.Jesosy.org | info @ Jesosy.org | www.facebook.com/Jesosy.org